Madaxweyne Siilaanyo oo Hambalyo iyo Codsi is-barkan munaasibadda Awgeed u diray Shacabka Somaliland | Somalilandpost
Madaxweyne Siilaanyo oo Hambalyo iyo Codsi is-barkan munaasibadda Awgeed u diray Shacabka Somaliland
September 11, 2016 | Published by: Cabdi
Hargeysa (SLpost)- Madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland Mudane Axmed Maxamed Maxamuud Silaanyo oo shacbiga Somaliland iyo shucuubta islaamka Hambalyo u diray munaasibada Ciidal Adxa awgeed, waxaanu madaxweynuhu sidoo kale shacabka ka codsaday inay meel uga soo wada-jeestaan wax kasta oo dhibaato u keenaya Amniga, Diinta iyo Dhaqanka Suubban.
Sida lagu sheegay war-saxaafadeed ka soo baxay madaxtooyada Somaliland oo xambaarsan dhambaalka madaxweynaha, waxa uu Md Siilaanyo ku bilaabay farriintiisa sidan:- “Milgo iyo Maamuus weyn ayey ii tahay in aan munaasibadda Ciidal Adxaha awgeed halkan uga jeediyo hambalyo iyo bogaadin dhammaan Shacbi-weynaha Somaliland meel kasta oo ay joogaan.
( Kullu-caam wa antum bikhayr ), ciiddan ciiddeeda kale ILAAHAY ha inagu gaadhsiiyo bed-qab, bash-bash iyo barwaaqo. Aamiin Aamiin Aamiin
In aynu dhinac uga soo wada jeesanno ilaalinta nabadgelyada iyo difaaca qarannimadeenna.
in aynu ilaalinno wada-jirka iyo isku-duubnida dhexdeenna.
in aynu is-gargaarno, isla markaana caawinno kuweena taagta daran ama tabaalaysan.
in aynu isu caqli-celinno, wanaagga is-farno, xumahana iska reebno.
in aynu ka wada qayb-qaadanno horumarka iyo dib-u-dhiska dalkeenna hooyo.
Waxaan ILAAHAY ka baryayaa inuu inaga aqbalo acmaashii suubanayd ee aynu samaynay maalmahan khayrka badan.
Waxanan u ducaynayaa inta bukhta ee xaalad caafimaad u jiifta, awoodina wayday inay inala ciidaan maalintan qiimaha badan, waxanan Alle uga baryayaa inuu caafimaad sareecana siiyo kana dulqaado xanuunka, Aamiin Aamiinintii, Intii dhimatayna waxan Alle uga baryayaa inuu u dambi dhaafo una naxariisto.” Sidaas ayuu madaxweynuhu ku yidhi Dhambaalkiisa.